Fortnite ichadzokera kuIOS kuburikidza neGeForce Zvino | Nhau dze iPhone
Muna Chivabvu 2021, takadzokorora nyaya yakataura izvozvo Fortnite yaizodzokera kuIOS hapana chikonzero chekupfuura neApp Store kuburikidza neGeForce Zvino, Nvidia's platform inoshanda nenzira yakafanana neStadia neMicrosoft xCloud, uko maseva ane basa rekumhanyisa mutambo.
Nekudaro, GeForce haikubvumidze kutenga mitambo, asi iri nyore chikuva chekugona tamba chero zita ratakatenga pane mamwe vhidhiyo mutambo mapuratifomu ingave iyo Epic Games Store, Steam… Mushure mekumirira kwenguva refu, GeForce ichatanga kupa Fortnite svondo rino kuburikidza nepuratifomu yayo kuburikidza nebeta yakavharwa.
Nenzira iyi, vese vashandisi vanoda kutamba Fortnite zvakare pa iPhone kana iPad, se vanozongoshandisa bhurawuza kuwana GeForce Zvino.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti, seStadia uye xCloud, GeForce Zvino haikwanise kupa application kuti uwane chikuva chako nekuda kwezvirambidzo zveApp Store.
Sezvakataurwa kubva vava kuda, fortnite offer tsigiro yakazara yekubata zvinodzora. Sezvingabvira, ichapawo tsigiro yevatongi, seizvo zvese Google neMicrosoft zvinopa nemapuratifomu avo emutambo wevhidhiyo.
Kuti uwane iyi beta inodiwa iva mushandisi anobhadhara wepuratifomu ino. Izvo zvisingazivikanwe parizvino ndezvekuti kutamba Fortnite kuburikidza neGeForce Zvino, zvichave zvakakodzera kubhadhara kunyoreswa kana Epic Mitambo yasvika chibvumirano chakakosha neNvidia kudzikisa muyero kana kuti haifanirwe kubhadharwa zvakananga.
Parizvino hazvizivikanwe kuti chii chingave chiri zuva rekuburitswa kweFortnit paGeForce Zvino. Tichafanirwa kumirira iyi beta bvunzo kuti tione kuti mashandiro acho akakwenenzverwa sei.
Kana zvese zvichishanda sezvaitarisirwa, Zvingangodaro kuti panosvika Kukadzi wegore rino, vese vashandisi veFortnite vanogona zvakare kunakidzwa nezita iri pane yavo iPhone, iPad kana kunyange Mac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Fortnite ichadzokera kuIOS kuburikidza neGeForce Zvino